डा. केसीको सत्याग्रहबारे मनिषा कोइरालासँग ७ प्रश्‍न – भिडियो हेर्नुहोस – Rabin's Blog
काठमाडौँ- चर्चित अभिनेत्री मनिषा कोइराला बिहीबार काठमाडौं आइपुगिन् भारतबाट र अनशनको २० औँ दिन डा. गोविन्द केसीलाई सुरक्षाकर्मीले जुम्लाबाट काठमाडौं ल्याए बलपूर्वक सोही दिन।
दुवै आगमन संयोग थिए। तर कोइराला डा. केसीलाई महाराजगञ्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पुर्‍याएकाे केहीबेरमै त्यहाँ पुगिन, उनलाई भेट्न । शुभकामना दिन। त्यो संयोग मात्रै थिएन। वास्तवमा उनी जुम्ला नै गएर अनशनरत डा. केसीलाई भेट्न जाने तयारीमा थिइन्।
पछिल्लो समय म धेरै नै व्यस्त थिए। तर नेपालमा के भइरहेको छ भन्नेबारे मेरो चासो उत्तिकै हुन्छ। समाचारपत्र पढ्छु। ट्विटर र अनलाइनहरु पनि हेर्ने गर्छु। समाचार पढ्दा पढ्दै मेरो मनमा धेरै प्रश्नहरु उठ्थे।
पछि धेरै व्यस्त हुनुपर्ने छ । त्यसैले छोटो समय भएपनि बुवाआमालाई भेटेर आउँने निधो गरे। आउनु भन्दा केही दिन अघिदेखि डा. केसीलाई फलो गरेको थिएँ । त्यतिखेर नै एक चोटी उहाँलाई भेट्नु पर्छ भन्ने लागेको थियो।
अोली चीनबाट फर्के लगत्तै समातिए अर्का सनकाण्डवाला माछा ( भिडियो)